Abenzi base China i-CNC yokuSebenza ngokuSebenza kwe-CNC APMT1135PDER-H2 Mingtaishun
BPGO5B UM01-M10P01-10 Umbala o-cyan-grey mnyama Ngobulukhuni obuphezulu obuphezulu kunye ne-resistanceto efanelekileyo yokuguqulwa kweplastiki. Ifanelekile ukusika ngesantya esiphezulu kunye nenkqubo yokugqiba yensimbi engenasici engenanto. Icinyiwe kunye nekhabhoni yentsimbi.
I-BPG20B M01-M15P10-20 Umbala o-cyan-grey mnyama I-PVD yambethe i-car-carbide.Use for varity yentsimbi engenasiphelo egqiba ukusika kwisantya esiphantsi ukusika isantya. Xa ufuna ubungqongqo obunamandla kunye nomgangatho ophezulu womphezulu.ukubonelela ngokusika ngokugqibeleleyo.Ukuphinda ubambe umothuko ophezulu.
Iimveliso zethu zamkelwe ngokubanzi kwaye zithembekile kubasebenzisi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekekayo ngokutshintsha kweemfuno zoqoqosho nezentlalo. Siyabamkela abathengi abatsha nabadala abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba banxibelelane nathi kubudlelwane bamashishini bexesha elizayo kunye nempumelelo efanayo!
Inkampani yethu ihlala igxila kuphuhliso lweemarike zamanye amazwe. Sinabathengi abaninzi eRashiya, kumazwe aseYurophu, e-USA, kumazwe akuMbindi Mpuma nakumazwe aseAfrika. Sisoloko silandela loo mgangatho sisiseko ngelixa inkonzo sisiqinisekiso sokudibana nabo bonke abathengi.
Egqithileyo I-Diamond Shape Carbide Ukutshintshwa kokufakwa kweShim CCGW090304